Sawir iyo Magaca Ninkii Gaadhiga ku laayay Askarta Yahuuda oo lasoo Bandhigay – Xeernews24
Sawir iyo Magaca Ninkii Gaadhiga ku laayay Askarta Yahuuda oo lasoo Bandhigay
9. Januar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Fadi Qunbar oo 28 jir ah ayaa shalay weerar uu u adeegsaday gaadhi nuuca xamuulka qaada ah waxaa uu ka fuliyay magaalada Barakaysan ee Qudus ee dhulka xooga lagaga haysto Dadka Reer Falastiin.
Ninkan ayaa gaadhiga nuuca Xamuulka qaada ah waxa uu ku weeraray askar Yahuud ah oo taagnayd degmada Armon Hanatziv ee magaalada Qudus, waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaare iskugu jiray dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay weerarkaasi gaadhiga loo adeegsaday waxaa ku dhintay 4-askar oo sadex kamid ah ay haween ahaayeen, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay 17-qof oo kale kuwaa oo qaarkood dhaawacyo culus soo gaadheen.
Ciidamada Yahuuda ayaa markii dambe toogtay Ninka Falastiiniga ah ee gaadhiga ku dilay Askarta Yahuuda, waxa ay sidoo kale ciidamada ay xidheen xaafada uu magaalada Qudus ka degnaa ninka weerarka geestay.
Ra’iisalwasaaraha maamulka Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ninkii weerarka ka gaystay magaalada Qudus uu taageersanaa kooxda la magac baxday Dawladda Islaamka ee Daacish.
Saraakiisha Amaanka maamulka Yahuuda Israa’il ayaa kulan deg deg ah ay weerarkan ka yeesheen waxa ay ku go’aamiyeen in la xidh xidhi karo dadka ay ku tuhmaan in ay xidhiidh la leeyihiin Kooxda Daacish iyada oon wax maxkamad ah la geyn.
Dhalinyarada Falastiin ayaa mararka qaarkood geeysta weeraro ay uga aargudanayaan Yahuuda dhulkooda xooga ku haysato, waxaa ayna Ciidamada Yahuuda mar walbo dhibaato ku hayaan Shacabka Reer Falastiin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/quds_1-1.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-09 18:52:502017-01-09 18:53:17Sawir iyo Magaca Ninkii Gaadhiga ku laayay Askarta Yahuuda oo lasoo Bandhigay
Gaadhi xawli ku socday oo lala beegsaday Askar Yahuud ah oo sugnayd goob ku... Jarmalku Ma yahay Dal Quwad leh(Xogta Dahsoon)